Nhau - 5 zvikonzero zvekusarudza chubhu kurongedza seyakakodzera mudziyo
Mazuva ano, kusiyanisa kurongedza kwave kuchishandiswa muzvizoro. Uye kushandiswa kwekusvina machubhu kuri kukura zvakanyanya. Iko kutakurika uye kuchinjika kwakakuita icho chakakodzera mudziyo kusangana nezvinodiwa zvakasiyana.
Zvese zvaunoda kuti uite kupop muvharo uye squeese, kutevedzera nekusunungura chivharo chembiya kana kudhonza usati washandisa. Zvichakadaro, iri nyore uye inotakurika kutakura nayo. Iwe haufanire kutora makuru / anorema mabhodhoro kana zvirongo.
Magirazi egirazi kana mabhodhoro anokwezva, asi anodhura. Ivo pamwe nekurongedza kwekunze zvese zvinowedzera pamutengo wechigadzirwa.
Nepo machubhu ari asingadhuri sarudzo. Mutengo wacho wakaderera uye mhando yacho yakanaka chose! Iyo inokwezva neyako yakasarudzika dhizaini.
Kusiyana nemapurasitiki kana mabhodhoro egirazi nezvirongo, machubhu akareruka, haana kusimba, kuchengetedza nzvimbo uye kushanda mukutakura.
Nekuti machubhu anogona kugadzirwa mumhando dzakasiyana uye saizi, saka zvinowirirana kune akasiyana mafomu. Kubva pa1ml kusvika pa500ml, inokodzera Essence, ruomba rwemaoko, sunscreen kana shampoo, kugadzirisa bvudzi uye zvese zvaunoda kuve nazvo. Nekudaro, kuita kwakawanda kuita chimwe chinhu chikuru chekushandisa aya machubhu midziyo.
Nekuda kwekuvandudzika kwetekinoroji, zvishandiso zvinoshandiswa kugadzira machubhu epurasitiki zvakave zvine hushamwari zvakatipoteredza mumakore apfuura. Iwe unogona kusarudza mapakeji aya kunge ari eco-hushamwari sarudzo.
Yakareba nyaya ipfupi, aya ndiwo mabhenefiti emachubhu semidziyo yekuzora. Kana iwe uri mugadziri wechigadzirwa chezvekuzora, tinokurudzira kuti iwe ufunge kushandisa zvekuzora machubhu. Uye yedu chubhu yekuzadza uye yekuisa chisimbiso muchina inogona kukubatsira iwe mukuwanda.
Saka Bata HX Machine izvozvi, yako-yekumira yekupakata muchina mutengesi uye ngatibatsire iwe!